Sponge Cake iresiphi
Ukuze ukubhaka ikhekhe okumnandi futhi Gingerbread akudingeki eziningi imikhiqizo. Izithako main ngokuvamile amaqanda, ushukela kanye ufulawa. Uma ikhekhe ukupheka ngokulandela imiyalelo ke uthola ikhekhe esifanele, lokho akufezi futhi kuyoba ezihlwabusayo kakhulu. Nazi ezimbalwa izindlela zakhe:
Bhisikidi iresiphi № 1
Izithako: amaqanda 8, inkomishi ufulawa, inkomishi ushukela.
Amaqanda, waphule uthele esitsheni abanye ngokujulile, kangangokuthi uma eshaya kubo, mass kwakhiwa bayovuka kakhulu. Kukhona futhi wengeze inkomishi ushukela. Futhi ngosizo mixer aqale enza. Le nqubo lide futhi kungathatha ihora. Uma basheshe, bese bhisikidi kamuva kungaba axazulule. Okuhle kunakho konke ukuthi, uma ucabanga ukuthi unayo mass ngokwanele kakade ngesiswebhu ngesheke. Sidinga ukuthatha isipuni umhlane uhlangothi yakhe ephansi mass ngesiswebhu. Khona-ke siphakamise spoon ubone ukuthi kwasesitsheni spoon liwa ngokushesha, kusho ukuthi wena ngesiswebhu mass akwanele. Khona-ke udinga ukwengeza mass okuholela impuphu futhi ngosizo mixer yenza mass ukuthola Ukwakheka eyohlobo. Coat phansi ngokukhethekile ezimise bayobhaka uwoyela. Ukwenza kube lula ukuthola bhisikidi ngemva ukubhaka, ezansi ungafaka ucezu yesikhumba. Kusukela inhlama ngesikhathi okusezingeni eliphezulu lokushisa likhuphuka, ukuma kufanele kube ngamasentimitha ambalwa ephakeme kunalokho Ugcwalise mass. Thela mass isikhunta bese uyibeka kuhhavini osuke usushisa kakade. Amazinga kufanele kube 180-200 ° C. Bhaka imizuzu engaba ngu-40. Ngakho, imizuzu okungenani angu-20 kuhhavini likhiphe kungenzeki, njengoba lokhu kungaholela ukuthi anga bhisikidi. Uma ungenalo dopechet bhisikidi, kungase futhi wehlise umoya. Uma ikhekhe usulungile, kuyatuseka ukuba amele cishe usuku, njengoba kuzoba esithambile futhi, futhi ayikwazi ukusika. Ngosuku olulandelayo, ungakwazi cwilisa isipanji ezinye impregnation elimnandi, ugologo noma ujamu nje futhi ukuhlobisa it ne ukhilimu ukwenza ikhekhe.
Bhisikidi iresiphi № 2
Izithako: ingilazi ufulawa, amaqanda 4, inkomishi ushukela, ibhotela.
Hlukanisa amaqanda futhi uthele okuqukethwe esitsheni ezijulile. Ngosizo mixer, bashaywe a lather aluhlaza. Khona-ke, kancane kancane shukela futhi abashaya kuze iziqongo abantamo. ufulawa Sieved, kancane uwathele emgqonyeni futhi ngobumnene ugovuze ngesipuni.
Ngemva kwalokho, amafutha lubricating ufafaze ufulawa baking dish ekhethekile futhi basakaza inhlama kuwo. Lapho le nhlama kufanele bathathe akukho kuka ¾ ukuphakama, njengoba kuyintando ashisa kakhulu, ukwenyuka ivolumu. Sabeka ukuma kuhhavini ubhake imizuzu 30-40 ezingeni lokushisa 180-200 ° C.
Ungavuli kuhhavini imizuzu engu-20 njengoba ikhekhe kungase axazulule futhi wonke umsebenzi uzophela. Sponge ikhekhe emva Baking ukusika kabi, khona-ke kungcono ukuba uphile cishe ngosuku. Inhlama angase engezwe vanillin, phansi nati, nokhokho oyimpuphu.
Bhisikidi iresiphi № 3
Izithako: amaqanda 3, inkomishi ushukela, inkomishi ufulawa, ibhotela.
Indlela ukulungiselela. Beat in the blender amaqanda noshukela kuze kube ivolumu liphindwe kabili ngobukhulu. Ngemva kwalokho, ngokuqhubeka uphehle, kancane kancane ngeza empuphu, kwaze bushelelezi. On ifomu kokufumbathisa uthele inhlama, ngiyibeke kuhhavini imizuzu 20-30 ezingeni lokushisa 200 ° C.
Bhisikidi iresiphi № 4
Izithako: ingilazi ufulawa, inkomishi ushukela, amaqanda 4, vanilla
Ukuhlukanisa amaprotheni kusuka amaqanda izikhupha. Ngesivinini ongaphakeme esebenzisa mixer aqale enza amaprotheni kancane kancane ushukela ne vanilla. Ngemva amaprotheni abangu wabhaxabulwa, uthele isikhuphasha bese uqhubeke eshaya mass. Ufulawa sieved ngokusebenzisa ngesihlungo, enezele isisindo, sibhebhezela ngesipuni aze laqanjwa eyohlobo. Inhlama okuholela is batheleka eligcotshiswe ngamafutha baking dish ekhethekile. Bhaka mayelana 25 imizuzu ngesikhathi lokushisa 180.
Pretzels German: isinyathelo ngesinyathelo recipe, zokupheka indlela nohlobo
Umuthi 'Prednisolone': side effects kanye Izimo
Ukulola imbazo ngesandla. Izinhlobo futhi injongo-eksisi